Madaxda maamul goboleedyada oo shir ku yeelanaya Beydhabo-DHAGEYSO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Koonfur Galbeed / Madaxda maamul goboleedyada oo shir ku yeelanaya Beydhabo-DHAGEYSO
Madaxda maamul goboleedyada oo shir ku yeelanaya Beydhabo-DHAGEYSO
May 13, 2018 - By: Mjama
Magaalada Baydhabo ee caasimada kumeel gaarka maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya waxaa ka socota qaban qaabada shirkii labaad ee ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada ee ku mideeyay golaha iskaahiga dowlad goboleedyada dalka.
Wasiirka warfaafinta Koonfur galbeed Soomaaliya Ugaas Xasan Cabdi Maxamed oo la hadlayay Horseedmedia ayaa ka warbixiyay ajandayaasha guud ee looga hadlayo shirka maanta lagu wado in uu ka dhaco magaalada Beydhabo ee gobolka Baay.
waxa uu sheegay in shirka waxyaabaha looga hadlayo ay kamid yihiin arimaha dastuurka,doorashada 2020-ka la filayo in ay ka dhacdo dalka iyo arimo ku saabsan xaalada amni ee deegaanada maamul goboleedyada dalka.
Xasan Cabdi Maxamed Wasiirka warfaafinta Koonfur galbeed ayaa sidoo kale sheegay in ka maamul ahaan aysan ka warhayn shirweynaha dastuurka ee maanta ka furmaya magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya taa badalkeeda ay madaxda maamul goboleedyada ka qeyb galayaan shirka Beydhaba ka furmaya.
Madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa in ay markale maanta kulmaan tan iyo markii ay yeesheen gole iskaashi kaasoo ay ugu magacdareen golaha iskaashiga dowlad goboleedyada.
Khilaafka dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa sababay dhowr arimood oo ay kamid yihiin siyaasadda arrimaha dibadda, gaar ahaan arrinta Khaliijka iyo talaabooyinka ay qaadayso dowlada uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo iyadoo markale madaxdu ay go,aano kasoo saari doonaan shirka ay kuleeyihiin magaalada Beydhabo.
Hoos ka dhageyso wareysiga wasiirka oo uu la yeeshay Axmed maxamed khaliif